Taariikhda My Butros » Sidee Si Taariikhda – Old School Style
Last updated: badda. 30 2020 | 3 min akhri
Qiimaha Intaa waxaa dheer la wareegtay ku dhawaad ​​walba, ka in juice cambe Cad ah oo hadda ku jira lagu daray kaalshiyam, in dukaanka raashinka oo iibiya alaabooyinka ayaa la dhigtay qaaciidooyinka fiicnaaday ah. Weli, waxaa jira kuwa weli door bidaan dugsiga jir, xitaa marka ay timaado xiriirka?
Si kastaba ha ahaatee, talo xiriir guridda weli biyo celin karin in mantras cusub-da? Ma sida sida dahab qaali u ah? Aan u ogaato.
Chivalry sii noolaadaan
Weydii lamaane kasta, kuwaas oo uu ku jiro xiriir qoto-dheer oo lagu guuleystay oo ku saabsan waxa u yeellay riix oo ay u badan tahay doonaa ixtiraamka xusid mudan in ay la hayaa midba midka kale. Just maxaa yeelay haweenku dagaalamo sinnaanta maalin walba, micnaheedu ma aha in ay sidoo kale la dagaalanka chivalry. Qof dumar ah oo weli jeclaan lahaa in uu helo xiriir ah la mudane ah oo ka qayb-galayn kursiga ama xataa albaabka iga furo iyaga. Arintanina Haweeney, ayaa muujinaysa xushmad waana wax ay tahay in laga sii joogay tan iyo guurka ka dib.
Ha seexan cadhooday
Lammaanayaasha ee soo maray muran markasta isku daydaa inaad u dagan gurtid ka hor waxaa wacaya habeenkii ah. Si kastaba ha ahaatee, ka hor mid ka mid xallin karnaa arrimaha, waxaa lagama maarmaan ah in marka hore ay dejiyaan, sida isku dayaya in ay xal u tahay dawlad kaabo-up ka sii dari doonto xaaladda oo keliya heli. Sidoo kale waa in ay xusuustaan ​​in murankaasi uu ku dhacay qof ay ku sugan yihiin jacayl leh iyo cidda ay ixtiraamaan, si ay muhiim ah in arrinta loo xaliyo khilafyada.
Hayso gubashadii dabka
Marka laba qof bilaabi shukaansi, ay ku dadaasho in aad loo hubiyo in daqiiqad kasta uu dareensan yahay gaar ah, Daadiyey jacayl iyo kalgacal . Wixii xiriirka in muddo dheer, Si kastaba ha ahaatee, lamaane waa adag u shaqeeyaan si ay u ilaaliyaan isla heerka go'an. All xiriir leeyihiin taxne kore iyo hoose, taasna waa wax caadi. Si kastaba ha ahaatee, in ay marnaba ha xiriirka ka qaataan dib u kursiga. Waa inay sii wadaan xidhiidhka ee neefta la mid ah sida ka hor, sababta oo ah in ay tahay wax iyagii ku soo wada hayn wakhtigaas oo wali iyagii ku soo wada hayn karaa jeer inuu yimaado.
Isku day in aanad u ogolaan maalin Mara iyagoo aan lala wadaagin ammaan gaar ah. Waxa ay noqon kartaa ammaan ah oo ku saabsan sida aad lamaanahaaga u egtahay, sida ay urin ama xitaa inta ay ka mahad celiyeen. U sheeg in ay sii qaalisan dahabka oo waa. Waxa ugu muhiimsan waa in mid noqon daacad ah ula bogaadin ay. Waa kuwan yar wax ka dhigaya xidhiidhka ka qiimo. Talo Tan waxaa laga yaabaa guridda , laakiin waxa ay ka shaqeysaa yaabab ee dhammaan xidhiidhada hadda.
La wadaag dhunkasho nabad gelyo ah
Sida ugu badan ee la wadaago dhunkasho nabad gelyo ah u muuqan kartaa si fudud oo aan qiimo lahayn labo xiriirkooda ku riyaaqayaa, waxa ay la micno badan oo ka dhigeysa in badan oo ka mid ah dugaal ka dambeeya. Wadaagista dhunkasho nabad gelyo ah waa mid ka mid ah hababka ugu fiican si ay u muujiyaan sida mid kalgacal noqon karaan lammaanahooda. Intaas waxaa sii dheer, samaynayaan maalin walba waxay caawisaa in la xoojiyo xiriirka, maadaama ay ka tarjumaysaa jacaylka ay dareemayaan ee midba midka kale.
Cunto wada qaado
wada Qaadashada cunto ka caawisaa in ay sii bond u dhexeeya lammaanaha xoog leh oo baaluq. Iska ilaali xaaladaha ay hal rafiiq cuno ee qolka lagu qadeeyo, halka mid kale waa qol fadhi ah, daawashada telefishanka. Tani ma aha caafimaad u leh koritaanka xiriir kasta. Cunto wada Qaadashada siinayaa laba qof oo fursad u sheekeystaan. Si kastaba ha ahaatee, fiira in chat waa inuu cuntada ka mid ah oo raaxo, taas oo macnaheedu yahay mawduucyada oo keeni khilaaf iyo dood Waa in laga fogaadaa. Jiritaan ee cunto wada qaadashada waa in aad isku dejiso, sidaa daraadeed dooro mowduucyo xiiso ay u sheekeystaan ​​oo ku saabsan.
Joogtee muuqaalka soo jiidasho leh waqtiyada oo dhan
Mid ka mid ah waa in had iyo jeer diyaar u ah inay tagaan mile oo dheeraad ah oo hore u marinaya muuqaalkoodu u noqon, si ay u eegaan wanaagsan ee lammaanahooda. Okay, sidaas waxaa laga yaabaa in ay naftooda koofiyaddii in isku joog ama dharka is biirsaday oo aan u muuqan yaabaa in raaxo leh oo dhan, laakiin is ilaaliyo, wanaagsan-raadinta iyo wada fiican u-gelin waa lagama maarmaan. Waxa aanu qaadan dadaal aad u badan oo in la fiirsado wanaagsan ee kan ay nolosha wadaagaan, gaar ahaan haddii ay taasi kaa caawin doontaa in la xoojiyo xiriirka, sida mid kasta oo ka wada-hawlgalayaasha ay awood u yeelan doonaan in ay ku soo laabadka kasta oo kale oo nool.
Waxaa jirta waddo fiican u lahayn in ay cadeyso in jirkaan ayaa dahab ka badan xidhiidh kuwaas taliyaa. Gold waa bir ah oo qaali ah oo aad u qiimo badan. In neefta isku, kuwaas oo canabka taliyaa waa mid aad u qiimo badan in xiriirka hadda. Sidaa darteed, waxaa muhiim u ah qof kasta oo ku jira xiriir in ay ku dhaqmaan talooyinkan iyo weligiisba sii ololka nool.
Waxaan ma rumaysan karo inaan Gadashada Kitaabka Tan